Muuri News Network » DHAGEYSO: Wasaarada Amniga oo Awamiir Cusub soo saartay & Muqdisho oo laba loo qeybiyay.
DHAGEYSO: Wasaarada Amniga oo Awamiir Cusub soo saartay & Muqdisho oo laba loo qeybiyay.
Wasaaradda Amniga gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay awaamiir ku aadan sugida amniga magaalada Muqdisho, kaasoo qeyb ka ah qorshayaal la doonayo in wax looga bedelo habka loo sugayo amniga magaalada.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha C/kaamil Macalin Shugri oo warbaahinta u aqriyay awaamiirta ka soo baxday Wasaaradda ayuu ku sheegay in Ciidamada Booliska iyo Nabadsugida loo kala qeybiyay amniga Sugida wadooyinka Caasimada.
Waxaa uu sheegay in Ilaalada Madaxda Mas’uuliyiinta dowladda inay yareeyaan dhaq dhaqaaqooda iyo socodka ay ku sameeyaan wadooyinka, isla markaana degmo walba lala soconayo dhaq dhaqaaqeeda.
Mr C/kaamil ayaa sheegay in howl galo lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka socdaan magaalada Muqdisho, isla markaana guri guri loo baarayo.
Wasaaradda Amniga waxay soo dhoweyneysaa habka farsamo ee loo qeybsaday Amniga Muqdisho, Ciidamada Booliska waxaa la siiyay Wadada Liido illaa Ex Koontarool, Nabadsugida waxay sugayaan amniga Jidadka waa weyn, sida Wadada 30-ka, Wadnaha iyo Warshadaha”ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga.
Ciidamada Nabadsugida ee horay ugu sugnaa Wadada muhiimka ah ee Maka Al-Mukarama ayaa laga wareejiyay, waxaana wadadaas amnigeeda loo xil saaray Ciidamada Booliska.
Golaha Wasiirada ayaa dhowaan soo saaray qorshayaal wax looga qabanayo amniga magaalada Muqdisho, iyadoo Amniga magaalada lagu wareejiyay Maamulka Gobolka Banaadir, iyadoo la hoos-keenayo Taliyeyaasha Nabadsugida iyo Booliska.